विशेष सर्लाही क्षेत्र नं. ४ को मतगणना अझै सूरु हुन सकेन
Ujyaalo मगलवार, मंसिर २६, २०७४ १७:३५:००
सर्लाही, मंसिर २६ – सर्लाही क्षेत्र नं. ४ को मतगणना अझै सूरु हुन सकेन । दलका प्रतिनिधि बीचको विवादले आइतबार राती १० बजेदेखि मतगणना रोकिएको छ । बलरा नगरपालिको जनता आधारभुत विद्यालय बेल्वाजब्दी मतदान केन्द्रको एउटा मतपेटिकामा ६ वटा मध्ये ४ वाट मात्रै शिल रहेको भेटिएपछि दलका प्रतिनिधिले विवाद गर्दा मतगणना स्थगित भएको हो ।
यसबारेमा निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेर पठाउँदा आयोगले गणना सूरु गर्न निर्देशन दिइसकेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
तर जिल्लामा दलका प्रतिनिधिबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । मंगलवार बिहान दलका प्रतिनिधीहरुबीच पुनः छलफलको तयारी भैरहेको छ । घण्टौ देखि मतगणना स्थगित हुँदा परिणाम सुन्न मतगणना स्थल सर्लाही क्याम्पस परिसर बाहिर बसेका राजपा र काँगे्रसका कार्यकर्ताबीच सोमवार दिउँसो झडप भएको थियो ।
झडपमा केही मानिस घाईते भएका छन् भने सवारी साधनमा समेत तोडफोड भएका छन् । मतगणना रोकिँदा सम्म सो क्षेत्रमा राजपाका उम्मेदवार राकेश कुमार मिश्र काँगे्रसका अमरेश कुमार सिंह भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ । मिश्रले १६ हजार ३ सय १८ र सिंहले १५ हजार ९ सय ३५ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।